Tatiana Larina, အ epitaph အတွက်အမည်ရှိအလုပ်သမားများကြီးကြပ်၏အဘကားအဘယ်သူခဲ့သလဲ | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
Tatiana Larina, အ epitaph အတွက်အမည်ရှိအလုပ်သမားများကြီးကြပ်၏အဘကားအဘယ်သူခဲ့သလဲ
ကျွန်တော်တို့ကိုရုရှားရဲ့သမိုင်းကိုရည်ညွှန်းတဲ့ခက်ခဲတဲ့မေးခွန်း။ အကယ်၍ သင်သည်မေးခွန်းတွင်အဆိုပြုထားသောရွေးချယ်စရာများကိုရွေးချယ်ပါက၊ Tatyana Larina ၏ဖခင်မှာ Quote မှ Eugene Oneginquot၊ A.S. Pushkin - စစ်တပ်။ ဒါဟာရိုးထုံးတမ်းစဉ်ကပတေရုငါတို့ကမိတ်ဆက်နှင့်လုံခြုံစိတ်ချစွာထက်ပို 100 နှစ်ပေါင်းတည်ရှိခဲ့သည်။
အလုပ်သမားများကြီးကြပ် epitaphs ထိုကဲ့သို့သောစစ်တပ်အမည်ရှိ Tatiana Larina ၏အဘဖြစ်၏ဘယ်သူပဟေဠိမေးခွန်းမှမှန်ကန်သောအဖြေ။
Pushkin Quote ၏ထူးခြားပြောင်မြောက်အလုပ်; Eugene Oneginquot; သူ Tatyana Larina ရဲ့အဖေစစ်တပ်က၌ရှိ၏။
အဆိုပါအလုပ်သမားများကြီးကြပ်ဟုခေါ်တွင် Pushkin ရဲ့သူ Tatyana Larina ၏ခမညျးတျော, ခဲ့ပါသည် စစ်ရေး။ ပထမ ဦး ဆုံးကြည့်ရမည့်ပုံပေါ်သကဲ့သို့ကွဲလွဲမှုမရှိပါ။ အသင်းခေါင်းဆောင်သည်ဆောက်လုပ်ရေးသို့မဟုတ်လယ်ထွန်စက်တပ်မဟာ၏ ဦး ခေါင်းသာဖြစ်သောကြောင့်။ အဆိုပါအလုပ်သမားများကြီးကြပ်သည်ထိုကာလ၏စစ်တပ်တွင်ရာထူးတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။
အေအက်စ်ပက်ရှ်ကင်၏ရေးသားချက်မှမသေနိုင်သည့်လိုင်းများကိုအမှတ်ရခြင်း; Eugene Onegin quote; Tatyana Larina ၏ဖခင်၊ Dmitry Larin ၏ဖခင်သည်အလုပ်သမားများကြီးကြပ်ခဲ့သူဖြစ်ကြောင်းအမှတ်မထင်တွေ့ရှိမိခဲ့သည်။ သို့သော်၎င်းသည်ဆောက်လုပ်ရေးတွင်အလုပ်လုပ်သောအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်မဟုတ်ပါ။ သူဟာစစ်သားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးmanကရာဇ်စစ်တပ်မှာကြီးကြပ်သူလည်းဖြစ်တယ်။
အဖြေ: စစ်ရေး .
သင်ဟာသက Denis Fonvizin မှတ်မိပါလျှင် အလုပ်သမားများကြီးကြပ်ထိုအခါတ္ထုထဲမှာ Tatiana Larina ၏အဘ (အဘယ်သူမျှမသံသယရှိလိမ့်မည် Eugene Onegin) ခဲ့ စစ်ရေး.
ပထမဆုံးရွေးစရာကိုရွေးချယ်ပါ စစ်ရေး - အဆိုပြုထားလေးခုအနက်မှမှန်ကန်လိမ့်မည်။
ငါတို့ရှိသမျှသည် ... ဒါကြောင့်ငါတို့ဖြည်းဖြည်းချင်းချစ်ခဲ့တယ် ... ဒါပေမယ့်ဒီနေ့ရုရှားကဗျာရဲ့ဂန္ထဝင်နဲ့အငြင်းပွားမှာမဟုတ်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ချက်ချင်းပဲအဖြေအမှန်ကိုရေးလိမ့်မယ်၊ သငျသညျအကြှနျုပျကိုမယုံလျှင်, အရင်းအမြစ်ကိုကိုးကား! Pushkin ကကမ္ဘာ့ဖလားကိုသိတယ်
သူ Tatyana Larina ဖခင်စစ်တပ်၌ရှိ၏။ ကအလုပ်သမားများကြီးကြပ်ဟုခေါ်တွင်ခဲ့သော်လည်း, ဒီသူတစ်ဦးအဆောက်အဦး site ပေါ်တွင်သာမန်အလုပ်သမားများကြီးကြပ်ကြောင်းကိုမဆိုလိုပါ။ ဗိုလ်မှူးချုပ်ကပဉ္စမတန်း၏ထိုကဲ့သို့သောရာထူးဖြစ်ခဲ့သည်။ ဘယ်သူမှန်းတဲ့မှန်ကန်သောအဖြေများ၏သမိုင်းကိုစိတ်ဝင်စားသည်။
Pushkin quote ၏ Eugene Oneginquot ၏လက်ရာကိုသတိရသူများ Tatyana Larina ၏ဖခင်ဖြစ်သူ Dmitry Larin သည်စစ်သားတစ် ဦး ဖြစ်သည်ကိုသူတို့မှတ်မိနိုင်သည်။ သူ၌5အတန်း၏စစ်အဆင့်ရှိသည်။ ဤသည်မှာဗိုလ်ချုပ်နှင့်စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးအကြားအလယ်ဗဟိုဖြစ်သည်။ ပြီးနောက်ဒီခေါင်းစဉ်ကိုဖျက်သိမ်းခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်ယေဘုယျအားဖြင့် Dmitry Larin ဟာဖခင်ကောင်းတစ်ယောက်ပါ။ အဖြေမှန်က စစ်ရေး.
ကျွန်ုပ်သည်ဤအဖြေ၏ရွေးချယ်မှုကိုသံသယမဖြစ်ခဲ့ပါ။ မကြာသေးမီကကျွန်ုပ်သည်ဘုရင်ခံစစ်တပ်တွင်ရှိခဲ့သည့်ရာထူးများနှင့်ခေါင်းစဉ်များအကြောင်း၊ ကျွန်ုပ်၏တပ်မဟာခေါင်းဆောင်ကိုမည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းကိုမကြာမီကဖတ်ခဲ့သည်။ Tatyana Larina ၏ဖခင်ဖြစ်ကြောင်းစစ်တပ်မှပထမအကြိမ်ဖြေကြားခဲ့သည်။
63 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,245 စက္ကန့်ကျော် Generate ။